अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Hot Post News
काठमाडौ । चर्चित बलिउड अभिनेता सलमान खानको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएको छ । ‘बिग बोस सीजन १३’ को धेरै चर्चा भइरहेको छ । कार्यक्रमको राम्रो टिआरपीको कारण, निर्माताहरूले पनि यसलाई पाँच हप्ता थप गर्ने निर्णय गरेका छन् । बिग बोस फेब्रुअरीमा समाप्त हुनेछ । कार्यक्रमको लगातार शुटिङ्ग र अन्य धेरै कुराहरुका कारण कार्यक्रम प्रस्तोता (होस्ट) सलमान खानको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएको छ । उनी अहिले कार्यक्रममा अलि रिसाएको जस्तो पनि देखिन्छन् । उनले कैयौं पटक कार्यक्रम छोड्ने कुरा पनि गरेका थिए । हाल बाहिर आएको जनकारी अनुसार, स्वास्थ्य समस्याका कारण सलमानको परिवारले पनि सलमानलाई कार्यक्रम छोड्न आग्रह गरेको छ । सलमान ट्राईजेमिनल न्यूरलजियाका रोगी छन् । डेकन क्रोनिकलमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार स्रोतसँगको अन्तर्वाता क्रममा उनले आफु ट्रिजेमिनल न्यूरलजियाले ग्रस्त भएको बताएका थिँए । यस रोगले गर्दा अनुह
मुम्बइ। बलिउडका दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दिन सिद्दिकीकी बहिनी सायमा तामसी सिद्दिकीको २६ वर्षको कलिलो उमेरमै निधान भएको छ । उनी विगत ८ वर्षदेखि क्यान्सरसँग जुधिरहेकी थिइन् । उनले पुणेमा अन्तिम सास लिइन् । रिपोर्टका अनुसार नवाजुद्दिन एक सुटिङको सिलसिलामा आफ्ना भाइ फैजुद्दिनको साथमा यतिबेला अमेरिकामा छन् । गत वर्ष अक्टोबरमा नवाजले आफ्नी बहिनीको बारेमा सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका थिए । उनले आफ्नो ट्वीटरमा बहिनीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै आफ्नी बहिनीलाई १८ वर्षको उमेरमा स्तन क्यान्सर भएको खुलासा भएको बताएका थिए । १३ अक्टोबरमा गरिएको यो ट्वीटमा नवाजले लेखेका थिए ‘आज उनी २५ वर्षकी भइन् र उनी अहिले पनि लडिरहेकी छिन् । म डा. आनन्द कोपिकर र डा. लालेश बुश्रीको आभारी छु कि उहाँहरुले उनलाई हौसला दिइरहनुभएको छ । म रसुल पुकुट्टीको पनि आभारी छु कि उहाँले मलाई यी डाक्टरसँग भेटाइदिनुभयो ।’ रिपोर्टका
काठमाडौं । राजधानीको एक व्यस्त गल्लीमा भएको आगलागीमा ३५ जनाको ज्यान गएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको रानी झाँसी रोड क्षेत्रको अन्न मन्डीमा रहेको कारखानामा आज बिहान आगलागी भएको हो । यस दुर्घटनामा ३५ व्यक्तिको मृत्यु भयो । दिल्ली आगलागी नियन्त्रण विभागका प्रमुख अफसर अतुल गर्गले भने, ‘अहिले सम्म हामीले ५० जना भन्दा बढी मानिसहरुलाई बाहिर निकाल्यौं । अधिकांश मानिसहरू धुवाँबाट प्रभावित छन् ।’ उप अग्नि प्रमुख अधिकारी सुनिल चौधरीले भने, ‘आगो ६०० वर्ग फिटको प्लाटमा छ । यो कारखाना हो । स्कूल झोला, बोतल र अन्य सामग्री त्यहाँ राखिएको थियो ।’ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले ट्वीट गरेर सम्बन्धित सबै विभागहरुलाई तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिए । दमकल विभागका अनुसार बिहान ५ः२२ (भारतीय समय अनुसार) मा आगलागी भएको थियो । ३० दमकल इञ्जिनहरू आगो निभाउन घटनास्थलमा छन् । त्यस्तै लोकनायक अस्पतालक
एजेन्सी– भारतको दिल्लीको एक खाद्य भण्डारमा भएको आगलागीमा परि ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परी १५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । समाचार संस्था एएनआईले दिल्ली प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार घटनामा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । घाइतेको लोक नायक अस्पतालमा उपचार गरिदै छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार खाद्य भण्डार रहेको एक घरमा आगलागी भएको थियो । आगो नियन्त्रणका लागि दमकलसहितका ३० भन्दा धेरै गाडीहरु खटिएका थिए । आगलागी विहान ५ बजे भएको थियो । उक्त भवनको तेस्रो तलामा एक बेकरी रहेको छ । बेकरीको माथिल्लो तलामा आगो लागेको थियो । जसका कारण पूरै भवन आगोको चपेटामा परेको थियो । दिल्ली फायर सर्र्भिका उपप्रमुख सुनील चौधरीले भने,‘आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ, ३० भन्दा धेरै दमकल अन्य गाडी राहत र वचाउ कार्यमा खटिएका थिए ।’
नेदरल्याण्ड्स, विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न मुलुकमा पर्छ । युरोपेली मुलुक नेदरल्याण्ड्समा हरेक वर्ष अध्ययन रोजगारी तथा पर्यटनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरु समेत जाने गर्छन् । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको नेदरल्याण्ड्स विश्वमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, जीवनस्तर, न्यून भ्रष्टाचार, आर्थिक समानता लगायतका सूचीमा शीर्षस्थ स्थानमा रहँदै आएको छ । त्यहाँका नागरिकहरु पनि उत्तिकै सम्पन्न तथा समृद्ध छन् । उन्नत तथा विकसित एवं प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र रहेको नेदरल्याण्ड्सले विश्वमा विकासको एककिसिमको उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको छ । निजी क्षेत्रको व्यापक उपस्थिती रहेको नेदरल्याण्ड्समा सार्वजनिक क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावशाली छन् । १६ औं शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म नेदरल्याण्ड्स पवित्र रोमन साम्राज्यबाट छुट्टिएको हाप्सबर्ग वंशको स्पेनी अधिराज्यको हिस्साको रुपमा रहेको थियो । त्यसबेला त्यहाँको
क’रणी पछि ह’त्या गर्ने चार भारतीयलाई ‘इ’न्का उन्टर’ गरेपछि प्रहरीलाई फूलले स्वागत
काठमाडौं । भारतको है’दरा’बादमा भएको सामूहिक ब’लात्का’रका ४ आ’रोपीहरूलाई भारतीय प्रहरीले गो’ली हा नी मा’रेको छ । प्रहरीले बिहीवार नेशनल हाइवेमा चारै जनाको इ’न्का उन्टर गरेको हो । इ’न्का उन्टरलाई लिएर सर्वसा धारणले प्रहरीको जय जयकार गर्दै फुलले स्वागत गरेका छन् । साथै उनीहरुले प्रहरीले गरेको यो अतीनै सरा’हनीय काम भन्दै प्रहरीलाई ल’ड्डु खुवाएर जिन्दाबादको ना’रा लगाएका छन् ।प्रहरीले आ’रोपीहरुलाई एनएच ४४ मा आ’परा’धिक दृश्य पूनरावलोकन गराउन लिएर जाने क्रममा चारै जना भाग्न खोज्दा गो’ली हानेको हो । तर, सञ्चार माध्यमले भने उनीहरूलाई प्रहरी नियन्त्रणमै गो’ली हानिएको जनाएका छन् । गत २७ नोभेम्बरको रातमा हैदराबादमा कामबाट घर फर्कँदै गरेकी एक महिला डाक्टरलाई चढिरहेको स्कुटर पञ्चर बनाएर उक्त चार जनाले सामूहिक क’रणी गरी ज’ला एर मा’रेका थिए ।महिलाको जलेको श’व ब’लात्का र गरिएको स्थान भन्दा ४० माइल पर बैं
डाक्टरलाई कर:णीपछि ह:त्या गर्ने चार जनालाई प्रहरीले यसरी गर्यो इ’न्का’उन्टर (भिडियोसहित)
२०७६ भारतको हैदरावादमा कर’णीप’छि ह त्या आरोपमा पक्राउ परेका चार जनालाई प्रहरीले इ’न्का’उन्ट’र गरेको छ । अघिल्लो साता अस्पतालबाट घर फर्किरहेकी २७ वर्षीया एक भेटेनरी डाक्टरलाई राति कर’णी गरेर मा:रिको थियो। समाचारमा जनाइएअनुसार हैदराबादबाट ५० किलोमिटर टाढा महबूब नगर जिल्लाको चटनपल्ली गाउँमा भएको हो। भारतीय प्रहरीलाई उदृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, ‘शुक्रबार बिहान ३ बजे चारै जनाको एक मु’ठभे’ड’मा निधन भएको हो। चारैजनालाई बुधबार प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो।’ २७ नभेम्बरमा एक भेटनरी डाक्टरको क’र’णी गरी चार युवकहरुले यस्तो हर्कत गरेका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानको आरोपीहरुलाई रि’क्रिएट गर्नका लागि घटना भएको स्थानमा लगेका थिए। अनुसन्धानबीच चारैजना आरोपीहरुले भा’ग्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बाध्य भएर यस्तो गर्न परेको थियो ।महिला डाक्टरले एक टोल प्लाजामा आफ्नो स्कूटी पार्क गरिन् र केही कामका लागि निस्किन
ब’लात्कारीलाई गो’ली हा’नेर मा’रेपछि हैदराबाद प्रहरी महिलाको र’क्षक भएको भन्दै बा’धे राखी !
एजेन्सी : भारतको हैदरावादमा कर’णी प’छि ह’त्या आ’रोपमा प’क्राउ परेका चार जनालाई प्रहरीले इ’न्का उन्टर गरेको छ । अघिल्लो साता अस्पताल बाट घर फर्किरहेकी २७ वर्षीया एक भेटेनरी डाक्टरलाई राति कर’णी गरेर मा’रिको थियो। समाचारमा जनाइए अनुसार हैदराबादबाट ५० किलोमिटर टाढा महबूब नगर जिल्लाको चटनपल्ली गाउँमा भएको हो।इ’न्का उन्टरलाई लिएर सर्वसाधारणले प्रहरीको जय जयकार गर्दै फुलले स्वागत गरेका छन्।साथै उनीहरुले प्रहरीले गरेको यो अतीनै सराहनीय काम भन्दै प्रहरीलाई ल’ड्डु खु’वाएर जि’न्दाबादको ना’रा लगाएका छन। गएराती इ’न्का उन्टर गरेका प्रहरीलाई त्यहाँ का महिलाहरुले महिलाको र’क्षकको सं’ज्ञा दिँदै राखी बाँ’ध्नुका साथै पु’ष्पवर्षा गरी भव्य स्वागत गरेको छ । भारतको तेलँगाना महिलाहरुले प्रहरीलाई रा’खी बाँ’धेकी हुन् ।भारतीय प्रहरीलाई उ’दृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ,‘शुक्रबार बिहान ३ बजे चारै जनाको एक मु’ठ भे’
एजेन्सी । भारतको हैदराबादस्थित तेलंगनामा केही दिन अघि भएको एउटा घटनामा संलग्न चार जनालाई प्रहरीले इ’न्का’उ’न्टर गरेको छ । २७ वर्षे महिला डाक्टरलाई क’रणीपछि ह त्या गरेको घटनामा संलग्न चार जनालाई प्रहरीले यस्तो सजाए दिएको हो । शमशाबादका डिसीपी प्रकाश रेड्डीका अनुसार प्रहरीले महिलालाई घटना घटाएको स्थानमै गएर उनीहरुलाई प्रहरीले कारवाही गरेको हो । महिलालाई चार जनाले क’र’णी पछि आ’गो ल’गा’एका थिए । प्रहरीले सो घटना कसरी भएको हो भनेर सोधपुछ गरेर यस्तो गरेको थियो । सोधपुछको क्रममा आरोपीले पुलिसको ह’ति’यार खो’सेर भा’ग्ने को’सिस गर्न थाले पछि प्रहरीले यस्तो क’डा कारवाही गरेको हो । उनले पुलिसमाथि पनि जा’इ’ला’गे । साइबराबादका पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनरले चारै आरोपी शुक्रबार बिहानै ३ देखि ६ बजेको बीचमा शादनगरस्थित चतनपल्लीमा मा’रि’एको जानकारी दिए । आरोपीको प्र’हा’र’बा’ट २ प्रहरी पनि घा’इते भएका छ
एजेन्सी– धर्मको भेषमा समाजलाई लुट्नेहरु धेरै छन् । बाबाको ढोंङ रचेर विभिन्न अश्लील हर्कत मच्चाउनेहरुको पनि कमी छैन । हालै एउटा यस्तै घटना घटेको छ भारतमा । बाबाको भेषमा बसेका एकजनाले युवतीहरूसँग अ’ श्लील हर्कत गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनीमाथि भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । भारतको राजस्थानको एक शहरमा एक बाबाको अश्लिल भिडियो भाइरल भएको हो । जसमा उनले बाबाको भेशभूषामा केही महिलाहरूसँग अ’श्लील हर्कत गरिएको देखिएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीयले उनीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । प्रहरीले उक्त भिडियो बनाउनेमाथि पनि कारबाही शुरू गरेको छ । यस घटनाका विषयमा जोधपुर ईस्टका डीसीपी धर्मेन्द्र कुमार यादवले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरेको बताएका छन् । यो पनि पढ्नुहोस ,‘माछा माछा मनोरञ्जक सिनेमा हो’ निर्देशक सुनील गुरूङ आफ्नो सिनेमा ‘माछा माछा’लाई सत